DAAWO-Shacabkii Ugu Badnaa Oo Ka Barakacay Laascaano Iyo Tukaraq Iyo Puntland Oo Ka Hadashay | Puntland
DAAWO-Shacabkii Ugu Badnaa Oo Ka Barakacay Laascaano Iyo Tukaraq Iyo Puntland Oo Ka Hadashay
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa sheegaya in qoysas horleh oo ka barakacay Tukaraq iyo Laascaanood ay gaareen deegaamo dhowr ah oo katirsan gobolkaasi.
Mid kamida ah masuuliyiinta ugu saraysa wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa sheegay dagaaladii ugu dambeeyey iyo dhaqdhaqaaqyada hadda ka socda Tukaraq ay sababeen inay dadku ka cararaan guryohooda.
Waxa uu sheegay in Soomaaliland ay shacabka ugu hanjabtay inay layn doonto haddii aysan taageerin Soomaaliland, waxaana intaasi u siidheer inay duqaynayso Laascaanood haddii looga guulaysto dagaalada Tukaraq.
Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa ilaa bishii June ee la soo dhaafay waxaa ka cararay in ka badan 2700 oo qoys oo gaarey Taleex, Xudur, Boocame iyo deegaamo kale oo katirsan gobolka Sool.
Maamulka Soomaaliland ayaa beeniyey warbixintii qaramada midoobey ee ahayd in dad ka badan 12,000 oo qof ay ka barakeceen Tukaraq tan iyo bilowgii sanadkaan oo ay ka taagnayd colaad u dhexaysa Puntland iyo Soomaaliland.